Fiainana mandrakizay ho an’ireo « ondrin’ny Tompo » - Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Fiainana mandrakizay ho an’ireo « ondrin’ny Tompo »
Isan’ireo andininy tena manome antoka, ary tian’ny olona fatratra io andininy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona io. Jesosy mihintsy no […]
Isan’ireo andininy tena manome antoka, ary tian’ny olona fatratra io andininy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona io. Jesosy mihintsy no manome fiainana mandrakizay dia mihazona. Fa iza moa no anaovan’i Jesosy izany ? Iza no soloin’ilay mpisolo anarana « azy » ao amin’io tenin’i Jesosy io ?
Hoy ny Jaona 10 :27
Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy,
Ho an’ireo « ondrin’i Jesosy » ilay teny fampanantenana fiainana mandrakizay sy fihazonana fa tsy ho an’ny olona rehetra tsy akory. Mba hampahazava kokoa ny tian’i Jesosy holazaina dia nosoritsoritany mihintsy eo amin’ny andininy faha-27 io ny toetoetran’ireo ondriny ireo :
1- Ny ondriko mihaino ny feoko. Ny « mihaino » ao amin’ny Baiboly dia midika hoe « mihaino mba hankato » fa tsy hoe mandre fotsiny.
2- Izaho mahalala azy. Milaza ny fisian’ny fifandraisana akaiky eo amin’ilay mpiandry sy ny ondriny.
3- ary izy manaraka Ahy. Manara-dia an’i Jesosy mba hianatra Aminy, izany hoe miaina ireo toetrany, manohy ny asa nataony, manome lanja ireo soatoavina naindraindrany (fiankinana tanteraka amin’Andriamanitra, fanetran-tena, fitiavana, sns).
Ireo ondriny IHANY no omeny fiainana mandrakizay sy hazoniny ka tsy hisy haharombaka.
Isika izay milaza fa efa nandray an’i Jesosy : tena ondrin’i Jesosy ary ve isika ? Izay ondriny araka ireo fanoritsoritana efa nomen’i Jesosy ireo ihany no hiara-paly Aminy amin’ny voninahitra rahatrizay hiverina Izy.
Ireo sakana amin’ny fankatoavana (1)
© 2020 Tranokala ofisialin'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara